Ahoana ny fomba hananganana tetikasa votoaty nandresy toa an'i Brian Dean, mpamorona ny backlinko SEO?
Milaza ny fitsipika momba ny fanamafisana ny motera rehetra fa ny loharanon-tranonkala rehetra, indrindra fa ny votoatin-tsindrim-peo, dia mila mamokatra votoaty tsy tapaka. Na izany aza, inona ny fahita matetika amin'ny famoahana votoaty? Raha ny tena marina, tsy misy fitenenana toy izany matetika ho an'ny fari-pitsipika na idirana satria ny zava-drehetra dia miankina amin'ny tranokao niche, ny tanjon'ny orinasa, ary ny mpihaino anao. Mazava ho azy fa mety ho tsara aminao ny mamoaka votoaty amin'ny fotoana rehetra anananao mba hizarana amin'ny besinimaro. Na izany aza, tokony ho vonona ianao fa amin'ity tranga ity dia tsy ho ankasitrahana ny votoatinao ary haingana be dia be - judi bola online indonesia terpercaya.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hizara aminareo ny eritreritro momba ity lohahevitra ity ary manaporofo ny antony mahatonga ny "latsa-danja" stratejim-pifandraisana tsara ho an'ny fampiroboroboana ny orinasa.
Afaka mahazo marobe sy mizara marobe ianao, mahazo rohy ankapobeny ary manintona kokoa ny fitohanan'ny fifamoivoizana "fomba tsy dia lehibe kokoa". Brian Dean, tompon'ny tranonkala Backlinko SEO, dia namoaka ny paikadiny ao amin'ny votoatin-drindriny. Namoaka ny habetsaky ny hafatra SEO tao anatin'ny taona maromaro izay izy. Ireo lahatsoratra rehetra ireo dia nitarika fifamoivoizana be dia be tao amin'ny tranokalany ary nahatonga azy io ho anisan'ny loharanom-baovao manan-danja indrindra ao amin'ny tranonkala. Ny sasany amin'ireo lahatsorany dia mendrika 3000 ampanaovina ary mihoatra ny roanjato roanjato avy amin'ny loharanom-baovao manan-danja sy azo ekena. Noho izany, araka ny hitanao, ny mpampiasa Backlinko SEO dia nahomby tamin'ny fametrahana ny rohy "latsaky ny zavatra bebe kokoa".
Ny tetik'asa content less
. Mila mampiasa ny karazana votoaty ianao ary mitazona ny sainy mandra-pamoakanao ny famoahana manaraka. Izany dia ahafahanao manorina mpihaino amin'ny alalan'ny fampisehoana ny fahaizanao sy ny lazanao.
Ity tetikady votoaty tsotra nefa maoderina ity dia mitaky:
Ny kalitao avo lenta, tsy manam-paharoa amin'ny fikarohana momba ny fikarohana;
Votoatiny azo jerena;
Ny votoatiny feno, ao anatin'izany ny fihoaram-pefy;
Long form texte;
Ireo lahatsoratra mifototra amin'ny fikarohana;
Mifantoka mafy amin'ny fanamafisana sy fampiroboroboana.
Ny paikady "Less is more" dia mifanentana tsara amin'ireo webmasters izay mampifantoka ny kalitaon'ny votoaty ito noho ny habetsahany. Ny fikarohana sy famoronana votoaty avo lenta indray mandeha isam-bolana dia afaka manokana fotoana sy ezaka bebe kokoa mihoatra noho ny famoahana lahatsoratra maromaro isan-kerinandro.
Ity fomba fiasa ity dia tsy mety amin'ny loharano rehetra. Ohatra, tsy misy dikany ny fampiasana fialamboly na fanabeazana bilaogy na media sosialy satria ilaina ny famoahana matetika ireo sehatra ireo.
Araka ny nambarako talohan'ny ohatra tsara indrindra amin'ny paikady vitsy "less dia bebe kokoa" dia ny famoahana Brian Dean ao amin'ny tranonkala Backlinko SEO. Izy no mamoaka ny lahatsoratra mifototra amin'ny fikarohana sy azo jerena isaky ny 4 herinandro na mihoatra. Na izany aza, na dia eo aza ny famoahana an-tserasera, dia miandrandra ireo lahatsoratra vaovao ireo mpampiasa.
Ny antontan'isa dia maneho fa ny fomba fitenin'i Brian Dean amin'ny famoahana lahatsoratra dia miteraka vokatra satria ny medaly sy ny mediana ho an'ny lahatsoratra 53 dia tena avo lenta. Ny salan'isan'ny isa dia 2490, ary ny median dia 1.280. Ny mahasamihafa ny sehatra fifandraisana tsy manam-paharoa dia mahagaga ihany koa - 275 isaky ny lahatsoratra ary 175 isaky ny mediana. Ny lahatsoratra rehetra tao amin'ilay trano dia nahasarika mpitsidika efa ho 4 tapitrisa ary mpijery 11 tapitrisa. Izany dia mampiseho ny fomba fiasa mahasarika ny fanentanana ara-barotra amin'ny votoatiny afaka manova tanteraka ny tranonkala amin'ny tranonkala ary manangana sehatry ny tranonkala amin'ny tsena nomerika.